कोरोना संक्रमणका बारे शुक्रबार विश्वमा के– के भए ? « Pen Nepal
कोरोना संक्रमणका बारे शुक्रबार विश्वमा के– के भए ?
Published On : 22 August, 2020 9:01 am By : पेननेपाल
एजेन्सी । कोरोना भाइ्सका वारे शुक्रबार विश्वभरमिा के –के भए त्यसको प्रमुख कुरा निम्नानुसार छ : –
लेबनानमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफका कारण दुई साताका लागि आंशिक लकडाउन घोषणा गरिएको छ । यहाँ रातिका लागि कफ्र्यु लागु गरिएको छ । ४ अगस्तमा बेरुतमा भएको विस्फोटपछि यहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था विग्रेको छ र त्यसपछि कोरोना संक्रमणको दर दुईगुन्ना भएको छ ।
केन्याको राजधानी नैरेवीमा अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालका डाक्टर हडताल गरिरहेका छन् । यी डाक्टरले आफ्नो बक्यौता तलबका साथै कोरोना संक्रमणका सुरषत्मक उपकरणको माग गरेका छन् ।
शुक्रबार दक्षिणकोरिया, पोल्याण्ड र स्लोभाकियामा एक दिनमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन् । दक्ष्णि कोरियामा ३२४, पोल्याण्डमा ९०३ र स्लोभाकियामा १२३ नयाँ संक्रमण पुष्टि भएका हुन् । युरोपिय देश खासगरी स्पेन र फ्रान्समा पनि कोरोना संक्रमण फेरि तिब्र भएको देखिएको छ ।
अमेरिकामा विगत २४ घण्टामा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने एक हजारबढी भएका छन् । यहाँ कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ७५ हजार पुगेको छ । अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिवेसनकाअनुसार आउने चार सातामा अधिकतम ३० हजारले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने आँकलन गरेको छ ।
हङकङले एक सेप्टेम्बरदेखि आफ्ना देशका सबै नागरिक अर्थात ७४ लाख जनसंख्यालाई निशुल्क कोरोना परिक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर कतिले यसको फाइदा उठाउँछन् भन्ने एकिन नभएको बताइएको छ ।